Afaka Hanintona ireo Mpijery Ao Amin’ny Tanin’i Telenovelas Ve Ny Fahitalavitra Iranianina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2015 18:51 GMT
Manandrana ny hanatratra ireo mpiteny Espaniola sy hifaninana amin'ireo telenovelas malaza mba hanintonana ny sain'ireo vahoaka Latino Amerikana ny Hispan TV, fandaharana iray an'ny IRIB – Fahitalavitry ny Repoblika Islamikan'i Iràna. Sary avy amin'i Youtube.
Tamina andrana nataony mba hanakaikezan'i Iràna kokoa ny faritra Amerika Latina, mandefa ny andian-tantara Iraniana voadika amin'ny teny Espaniola ho an'ireo vahoaka Latino Amerikana ny Hispan TV, fantsona iray amin'ny teny espaniola tantanàn'ny IRIB an'ny Repoblika islamikan'i Iràna, fantsona izay afaka hidirana amin'ny Youtube. Tafiditra ao anatin'izany fandaharana izany ny tantara isan-karazany momba ny Iraniana, ahitana ny resa-pitiavana entina hifaninana amin'ireo tantaram-pitiavana fantatry ny vahoaka ao an-toerana tsara.
Ny firenena Iraniana sy Latino Amerikana, toa an'i Venezoela, dia nitazona ireo fifandraisana ara-politika hafahafa nandritra ny taona maro. Tany aloha, efa nanoratra mikasika ny fahatapahana nisy teo amin'ny kolontsaina Venezoeliana ny Global Voices. Betsaka amin'ireo kolontsaina Latino Amerikana no tsy mba menatra amin'ireo vehivavy tsy dia mitafy sy ny zava-pisotro mahadomelina, raha ireo sangany mpitondra ao Iràna kosa miezaka ny hanajàna ireo fihetsehampo ara-pinoana mifikitra amin'ny nentin-drazana. Na eo aza izany, toa samy manao izay vitany ireo firenena roa ireo mba hitazonana fifanakalozana kolontsaina amin'izao fotoana izao, araka ny nahitantsika Iranianina maro nirohotra tany Karakas mba hameno ireo tetikasan'ny fanjakana sy ny birao, ho ampahany ao anatin'ny fifandraisana. Toa nitohy hatrany amin'ny televiziona io fifanakalozana io, satria ny tambajotra amin'ny teny Espaniola izay an'ny fanjakana Iraniana dia miezaka haka ny fo sy saina amin'ny alalan'ny tsiro avy amin'ny fialamboly Iraniana ihany.
Fa ireny sarimihetsika ireny, izay miresaka ny fitsipi-pitondrantena tena akaiky indrindra amin'ny soatoavina iraniana ary mpitahiry ny nentim-paharazana ampiroboroboin'ny fanjakana, ve mety ho afaka hahazo laza ao aminà faritra iray efa zatra karazana tantara sy toe-javatra tena hafa mihitsy.
Toa tsy tonga hatramin'ny 100 ny isan'ny jery ao amin'ny Youtube, na taorian'ny fivoarana kely natao tsy ankiteniteny, nefa hita ihany tany anatin'ny tantara. Ny fandaharana vao haingana, Longitude 0, dia tantaram-pitiavana mampihetsi-po misy eo aminà Iraniana iray mpianatra sy zazavavy tanora Jiosy iray tao Paris. Rehefa miresaka anatinà lohahevitra iray heverina ho mahabe adihevitra avy amin'ireo fenitra Iranianina, toa mody tsy mahita ireo fomba mahazatra ireo Latino Amerikana mpijery ny Televiziona ireo andian-tantara ireo. Ohatra , ny televiziona sy sarimihetsika manerana ny Amerika Latina dia mazàna mampiasa ny lantompeo Meksikana mahazatra. Kanefa ireo fandaharan'ny Televiziona Hispan dia mampiasa io fiteny io miaraka amin'ny lantompeo espaniola. Mandona ary mahatsikaiky be io fahasamihafana io eo amin'ny vahoaka Latino Amerikana.
Na izany aza, miezaka ankolaka ny hiala amin'ny fomba Iraniana mahazatra ireo fampisehoana Iraniana ireo, amin'ny fiezahana manintona ireo mpijery Latino Amerikana. Ny vehivavy, ohatra, tokony hanao manja maso bebe kokoa, ary na ireo mpiantsehatra tsy miozolmana aza dia mipoitra tsy misarona voaly eo amin'ny fakantsary .
“Longitude 0″ no anarana espaniola nomena ilay andian-tantara Iraniana izay miresaka ny tantaran'i Habib, tanora Iraniana mpianatra izay babo taminà zazavavy Jiosy mitondra ny anarana hoe Sara. Sary avy amin'ny horonantsarin'ny Youtube afaka jerena ao amin'ny fantson'ny HispanTV.
Tao amin'ny haino aman-jery sosialy, tsy dia nisy tsikera maro momban'ny Televiziona Hispan loatra, ary ny tsikera mety ho hita dia hanondro ny fandàvana ilay tambajotra vaovao. Tahaka ny mampiely ireo fitsaratsaram-poana mikasika an’ i Iràna ireo tsikera, ohatra, Leonardo Padrón, olo-malaza mpanoratra tantara, dia nibitsa ny fandinihany mikasika ny fanambaràna ny mety ho fifandraisana misy eo amin'ilay Fahitalavitra mpanohitra teo aloha Globovisión sy Hispan TV. Ho setrin'izany, nitsikera ny tetikasa ireo mpampiasa, raha namoaka vazivazy mampiasa ny anaran'ireo olo-malaza Venezoelana mpilalao sarimihetsika ireo hafa, maka sary an-tsaina izay tokony niantsoan-dry zareo azy ireo, raha sarimihetsika iranianina izy ireny :
@Leonardo_Padron Lanzarán las telenovelas "La Apedreaíta", "La Dama de Burka", "Mi Burka Bella", "Carita Tapada" y "Sharia la del Barrio".
— Marco T. Socorro (@MarcoSocorro) May 30, 2013
Hamoaka tantara amin'ny fahitalavitra antsoina hoe “Ilay Vehivavy Notoraham-bato,” “Ilay Vehivavin'ny Burka,” “Ny Burka-ko Tsara Tarehy,” sy “Tava Misarona” ry zareo
Mbola betsaka ny làana tsy maintsy diavin'ny fandaharan'ny televiziona Iraniana ao Amerika Latina, alohan'ny ahafahany mifaninana amin'ny antso efa sitrahan'ireofialamboly efa tsara toerana, tahaka ny fampisehoana avy any Torkia. Eny tokoa, ireo seho Tiorka anaty fahitalavitra mitobaka betsaka, mampivarahontsana, ary matetika mangotrangotraky ny resaka firaisana, toy ny Thousand and One Nights, dia nahazo fanarahana malaza teo amin'ny sehatry ny telenovela.
Ao Iran, ohatra ny toa handresy ihany koa ireo tantara mitohin'i Amerikàna Latina. Mirohotra ho iray feo amina isa maro ry zareo Iraniana hijery telenovelas avy ao Amerika Latina alefa amin'ny alalan'ny fahitalavitra mandalo zanabolana .
Taona maro lasa izay, nisy adihevitra mafana rehefa injay nalefan'ny Farsi1, fantsona iray mipetraka any Emira Arabo Mitambatra ary azo erena ao Iràna amin'ny alalan'ny zanabolana tsy ara-dalàna tsy mifandray amin'ny fanjakàna, ny El Cuerpo del Deseo. Nadika hoe Vintana Faharoa,noheverina ho firaisana ara-nofo tafahoatra ny fotokevitr'ilay fandaharana avy amin'ny Farsi1, izay nanivana ny sasany tamin'ny votoatiny. Raha ny marina, ny lahatsary fohy fampahafantarana azy io ihany dia mampiseho ny fahasamihafana ara-kolotsaina sy endrika misy eo amin'ny famokaran'ny telenovelas sy ny HispanTV.
Ny tolotr'i Iràna aminà tantara mampientanentana miresaka fianakaviana sy soatoavina nentim-paharazana dia sarotra amidy manoloana ireo ‘ melodrames ‘ mahazatra. Na eo aza ireo fifanoherana ireo, tsy azo lavina ny fakàn'ny fifanakalozana kolontsaina toerana, ary ny fifanoherana eo amin'ireo fahitalavitra vokarina amin'ireo kolontsaina roa ireo dia maneho betsaka ny mikasika ny anjara asa sy toerana tànan'ny vehivavy, fianakaviana, fitiavana, ary maro hafa.